Pejy fandraisana • World Modelling
BLOG: MODELA AVY AMIN'NY BACKGROUND
Fizarana bilaogy: lesona maodely, fampianarana, torolàlana, zava-misy mahaliana.
FIVORIANA RETAILY: Vokatra famolavolana modely
Fivarotana antsinjarany miaraka amin'ny fanoloran'ny marika anay: ny vokatra avo lenta indrindra ho an'ny mpanera.
Lisitry ny fivarotana sy mpivarotra ofisialy miaraka amin'ny tolotra Modellers World
Mba hahamora kokoa ny fitetezana ny bilaogy, ny fidirana ao aminy dia voakambana arak'ireto sakana manaraka ireto:
Fampisehoana ny teknikan'ny loto sy ny soritry ny modely Miara-miasa amin'ny modely manomboka amin'ny sehatry ny fisehoan'ny kilalao ka hatramin'ny famoronana ny fiheverana ny zava-misy.
Ny zava-drehetra momba ny asa maodely fototra. Momba ny fametahana, fanodinana ary fanaovana hoso-doko, araka ny Maxim antsika: ny fanaovana maodely hatramin'ny voalohany.
Fifandraisan'ny asa miaraka amin'ilay maodely manomboka amin'ny fanapahana voalohany ka hatrany amin'ny galeria farany.
Fizarana bilaogy natokana ho an'ny lohahevitra maodely: tsanganana, tatitra, fanadihadiana. Tatitra avy amin'ny hetsika maodely. Somary momba ny miaramila.
Fampisehoana boaty alohan'ny hametahana, fanandramana akora simika sy kojakoja fanaovana maodely. Izay itondrantsika ny tanantsika, amin'ny zava-kendrena ary amin'ny tanjona.
Galeria famaranana ny tetikasa vita. Ireo maodely rehetra izay niasako sy namboarina tamim-pahombiazana dia manana toerana amin'ity fizarana ity.
Inona no vaovao ao amin'ny Modelarski World. Ny zava-drehetra momba ny zavatra miova sy mitranga eo amin'ny pejin'ilay tranonkala, fa koa momba ny vaovao sy ny fanambarana an-tsena.
Amin'ity fizarana ity dia manolotra kojakoja kely vita amin'ny trano, gadget ary fitaovana ilaina ho an'ny maodely sy mpankafy DIY izahay.
Fampidirana bilaogy farany
Inona no soratantsika izao, inona no andehanantsika:
Menaka maloto Wash 'ami acc. tompony Mirek Serba
Oil Wash ireo no vokatray izay reharehanay manokana. Iza moa i Mirosław Serba eo amin'ny sehatry ny modely poloney, tsy mila hazavaina. Lehilahy manan-talenta iray, visionary modely, ary modely amin'ny [...]
Famerenana amin'ny Grot Orderly
Misaotra ny mpanoratra ary manasa anao izahay hanaraka azy amin'ny haino aman-jery: PAYPAL ME: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotorderly.cupsell. pl / DISCORD LINK: https://discord.gg/jxzq2rx PEJY AO amin'ny FACEBOOK: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG ON BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Sarimihetsika vaovao amin'ny fantsona Agtom
Androany, tamin'ny alina be, nisy horonan-tsary iray hafa tao amin'ny fantsona Agtom nanidina avy tamin'ny fananganana ny tanky 7TP - IBG 1:35, vaovao avy amin'ny tranon'omby IBG. Tomek dia nanolotra ny teknika amin'ny fametrahana loko wash airbrush. Misaotra anao nisafidy [...]
JEREO NY POSTS REHETRA AO AMIN'NY BLOG
Fandraisana anjara malaza indrindra
Zahao hoe inona no vakin'ireo mpanjifanay amin'ny tranokalanay:
Fampiharana loko amin'ny maodely
Fomba fanamboarana ny lamba famaohana amin'ny maodely Fomba fanamboarana fehiloha amin'ny maodely
teknika fanamorana spaonjy - tsotra sy mahomby!
Mpikarakara atrikasa avy amin'ny HobbyZone
mendrika izany, tsy mendrika ve izany? - Famerenana
Rust amin'ny muffler
ny fomba hahatratrarana haingana sy mora ny vokatra mahaliana amin'ilay maodely
Hery ao amin'ny vondrona
Manana kaonty Facebook ve ianao? Midira amin'ny vondrona misy anay Mpankafy modely sy toetrandro!
Ny maha eo amin'ny fiarahamonina dia fotoana lehibe hanehoana ny tenanao, hikatsaka aingam-panahy ary hikatsaka torohevitra. Manaova olom-pantatra modely, araho ary ampidiro ny fifanakalozan-kevitra. Tadidio fa izay tsy mametraka fanontaniana dia tsy mahazo fahalalana. Mikarakara fifaninanana bisikileta ihany koa izahay miaraka amin'ny loka sy ny Tompondaka amin'ny Tompondaka amin'ny Tompondaka Erantany amin'ny vondrona.
TE hiditra aho
Ity no lazain'izy ireo momba anay:
Tena mamporisika azy aho. Sombin'asa tsara, torohevitra matihanina, drafitra fananganana ary galeria tsara tarehy isaky ny ambaratonga fandrosoana amin'ny maodely.
Hevitra avy amin'ny Facebook
Ny tsara indrindra amin'ny PL! Tranonkala, fivarotana, tolotra tena tsara. Manoro hevitra ny hiditra ao amin'ny vondrona aho, kolontsaina avo kokoa.
Vondrona lehibe sy mahaliana tokoa miaraka amin'ny hevitra tena mahaliana
Teny vitsivitsy momba ny mpanoratra
Ny fanaovana modely dia asa iray nandany ahy hatramin'ny fahazazako. Mampivelatra hatrany ny fitiavako aho, izay niteraka ny Modelarski World: tontolo iray ahafahako mampifangaro ny fialamboliko amin'ny fiainako matihanina. Izay laharam-pahamehana ny kalitao ary ny fialan-tsiny no tsy olana.
Tompon'ny orinasa Modelarski Świat
Misimisy kokoa momba ny orinasa
© 2022 Modeling World. Namboarina tamin'ny alàlan'ny WordPress sy ny Lohahevitra Mesmerize